အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအပေါ်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ထိရောက်စွာပြောကြားချက်များ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မွတ်စုဟုပြောနေကြသော ဖွတ်လော်ဘီများ အမျိုးချစ်ချင်ဟန်ဆောင်နေသောမျိုးညစ်များ အဘဘောမအရိုးကိုက်သူများ သေသေချာချာဖတ်
(၁) ILO ဆွေးနွေးပွဲ အပြီး၊ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဘန်းမြို့ - ၁၄-၆-၂၀၁၂
ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလို သတ်မှတ်ပါသလား ?
” အဆင်း ရဲ ဆုံး ဒေသ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
ပြဿနာ တွေ အတော် များ ” အဆင်း ရဲ ဆုံး ဒေသ ဖြစ်တဲ့ အတွက်
ပြဿနာ တွေ အတော် များပါတယ်...။
နယ်စပ် လုံခြုံရေး နဲ့နိုင်ငံ တွင်း ရွှေ့ ပြောင်း ၀င်ရောက် နေထိုင်
သူ တွေ အခြေချရေး ကိစ္စတွေ မှာ သက် ဆိုင်ရာ အာဏာ ပိုင် တွေ အနေနဲ့ 
လာဘ်စား မှု ကင်းပြီး ၊မဟုတ်တာ မလုပ် တဲ့ အခြေအနေ မျိုး ရှိ သင့် ပါတယ်။ "
ရိုဟင်ဂျာ တွေ မှာ နိုင်ငံ သား ဖြစ်ဖို့အခွင့် အရေး ရှိသလား ?
“ ဘယ်လိုလူတွေ နိုင်ငံ သား ဖြစ်ဖို့အရည် အချင်း ပြည့်မှီ
သလဲ ၊ နိုင်ငံ သား အခွင့် အရေး က ဘာ တွေ လဲ ဆိုတာ နဲ့ပတ်သက် ပြီး ..
ရှင်းလင်း တိကျ တဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ် လို အပ် တယ် “
ရိုဟင်ဂျာ တွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ရှိသလား ?
( သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ထပ်မံမေးမြန်း)
" တိကျရှင်းလင်း ပြတ်သား တဲ့..
နိုင်ငံ သား ဖြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ တစ်ရပ် လိုအပ် ပါတယ် "
***သတင်း ထောက်များ က ရိုဟင်ဂျာ ဟု အမည် နာမ မှည့် ခေါ် ပြီး
မေးသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က
နယ်စပ် က ၀င်ရောက် လာသူ.. ဟုသာပြောခဲသလို..
ရိုဟင်ဂျာအရေးဟု မပြောပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်အရေးဟုသာ
(၂) အော်စလိုဖိုရမ်အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၊နော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ ၊ ၁၆-၂-၂၀၁၂..
ရိုဟင်ဂျာဟာ တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အဖြစ် ခင်ဗျားလက်ခံသလား?
( သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ချောင်ပိတ်မေးခွန်း)
ပြသာနာတွေရဲ့ အရင်းမြစ်ဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကင်းမဲ့လို့ပဲဖြစ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေ နဲ့ သတ်မှတ်ထားသလဲ
ဆိုတာ ကို တိတိကျကျ ပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေ မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ ပြောရတာခက်ပါတယ်။
ဥပမာတစ်ခု ပြောပြရရင်၊ ရွေးကောက်ပွဲ အတွင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ 
စည်းကမ်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။
ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်က မြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်၊
သူ့ မိဘတွေ က မြန်မာတွေ ဖြစ်တယ်၊
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း သူ့ ဖခင်က တခြားနိုင်ငံတစ်ခု မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူလိုက်လို့ 
သူ့ ကို သတ်မှတ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီဘူး ဆိုပြီး ပယ်လိုက်တယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ ဆီမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဘယ်လို ဥပဒေအချက်တွေ
သတ်မှတ်ထားသလဲ ဆိုတာတောင် ကျွန်မ တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိဘူး။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကလဲ သူတို့ နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်၊
ကျွန်မတို့ ဘက်ကလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံသား မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်၊
ဒါဆို သူတို့ တွေ ဘယ်က ရောက်လာကြတာလဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် လက်ခံမှာလား၊ ငြင်းပယ်မှာလား ?
( ထပ်မံ ချောင်ပိတ်သောမေးခွန်း)
" I don't know ..ကျွန်မ မသိပါဘူး။
ရှင်က ရိုဟင်ဂျာလို့ ပြောတဲ့နေရာမှာ၊ ဘယ်သူတွေကို ရည်ညွန်းတာလဲ?
မြန်မာပြည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက နေထိုင်လာတဲ့သူတွေ လား၊
ဒါမှမဟုတ် သိပ်မကြာသေးခင်က မှ နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ သူတွေ ကို
တချို့ ကလည်း အခု မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ ပြောဆိုနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ဟာ
မြန်မာပြည်တွင်း နှစ်အတော်ကြာ နေထို်င်နေတဲ့ သူတွေ မဟုတ်ပဲ၊
လတ်တလောက မှ ဘဂ်လားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက နေ ကူးလာတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ 
တချိန်တည်းမှာပဲ ဘဂ်လားဒေ့ရှ် ကလဲ သူတို့ ကို မြန်မာနိုင်ငံက ကူးလာတဲ့သူတွေ လို့ 
ပြောတယ်။ ဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိပဲနဲ့ ဒီပြသာနာကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး။ အခု လတ်တလော မှာဖြစ်တဲ့ ပြသာနာကို ပဲ ကြည့်လို့ မရဘူး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေ၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်ချက် စတဲ့ ဥပဒေ အသေးစိပ်နဲ့အခိုင်အမာရှိတော့မှ၊ အဲဒီ အချက်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်လို့ ရမှာဖြစ်တယ်။"
(၃) BBC အင်တာဗျူး၊ ခေတ္တ လန်ဒန်မြို့ ၊၂၀၁၃ အောက်တိုဘာလ ...
ဓါးစာခံအများစုဟာ မွတ်ဆလင်တွေဆိုတာကို ဒေါ်စု လက်ခံပါသလား ။
မွတ်ဆလင်တွေကို စနစ်တကျ ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ
အထောက်အထားလည်း ရှိနေပါတယ် ။
(ဘီဘီစီသတင်းထောက် Mishal Husain )
"ဟုတ်ပါတယ် ။ မွတ်ဆလင်တွေကို ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အကြမ်းဖက်မှုကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်း ရင်ဆိုင်ခံစားခဲ့ရတာပါဘဲ ။ နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ကြောက်ရွံမှုတွေ ရှိနေတယ် ။
ဒါကဘဲ ဒီပြသာနာတွေကို ဦးတည်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ ။
အားလုံးကို ကျမနားလည်စေချင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ တုန့်ပြန်ခြင်းတွေကလည်း ကြောက်ရွံစိုးထိတ်မှုကို အခြေခံတယ် ဆိုတာပါဘဲ ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင် အင်အား ( global Muslim power )
သိပ်ကြီးမှန်း လူတိုင်း သိနေကြတယ် ဆိုတာ ကျမတို့အားလုံးလက်ခံကြမှာပါ ။ ကမ္ဘာ့နေရာတော်တော်များများမှာ ဒီအင်အားကို သိမြင်ကြသလို
ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်း သိမြင်ကြပါတယ် ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ အပြုသဘောပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကြားထဲမှာ
သိပ်ပြီး စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလှ ၊ မလွယ်လှတဲ့ အဖြစ်တွေကလည်း ရှိနေတယ်နော် ။
အထူးသဖြင့် မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေကို ဦးတည်ထားတဲ့ အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေပေါ့ ။
အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စု ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ ။
တချို့က ဒါကို မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်နေမှု ( ethnic cleansing ) လို့ ပြောနေကြတယ် ။
" မဟုတ်ပါဘူး ။ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီနေရာမှာ ကျမ သိစေချင်တာက မြန်မာ့လူဘောင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ
သဟဇာတဖြစ်ဖြစ် ပေါင်းစည်းနေထိုင်နေကြတဲ့ သဘောထားမျှတတဲ့
မွတ်ဆလင်တွေ အများကြီး ရှိတယ် ဆိုတာပါဘဲ ။
ဒီပြသာနာတွေဟာ မနှစ်က စပေါ်လာတာပါ ။
စိုးရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေ ရှိနေလို့ လို့ ထင်ပါတယ် ။
ဒီစိုးရွံထိတ်လန့်မှုတွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေဘက်မှ မဟုတ်ပါဘူး ....
မြန်မာတွေဘက်ကလည်း ရှိနေတယ် ဆိုတာကို
အားလုံးသဘောပေါက်နားလည်ဖို့ လိုပါတယ် "
နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ကြောက်လန့်မှုတွေ ရှိတယ် ဆိုရင်တောင်မှ
ခံစားရတဲ့အတိုင်းအတာ ပဏာမချင်း မညီဘူး ဆိုတာကို ဒေါ်စု လက်ခံမလား ။
မြန်မာမွတ်ဆလင် တစ်သိန်းလေးသောင်းလောက် အိုးအိမ်တွေ စွန့်ပြီး
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ သွားနေကြရတယ်လေ ။
သူတို့က ဒီတိုက်ခိုက်အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့ အဆိုးဆုံးဒုက္ခတွေကို ခါးစည်းခံရသူတွေပါ ။
" ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအများကြီးလည်း မြန်မာပြည်ကနေ
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြရတာပါဘဲ ။
ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ ရောက်နေတဲ့
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်း အများကြီးပါ ။
အများစုဟာ ထိုင်းမှာပါ ။
ကမ္ဘာအနှံ့မှာလည်း ပြန့်နေတာပါဘဲ ။
ဒါက အာဏာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာ ကျမတို့ ခံစားခဲ့ရတဲ့
ဒုက္ခတွေရဲ့ ရလာဒ်ပါ ။ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေရင်
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံကြည်တတ်ကြတော့ပါဘူး ။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မယုံကြည်မှုကို မွေးဖွားစေပါတယ် "
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:23 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook